एउटा पूर्ण महिला, रातको समय, बसभित्र सबै निदाईसकेका ! – Jagaran Nepal
एउटा पूर्ण महिला, रातको समय, बसभित्र सबै निदाईसकेका !
रामनाथ खनाल बुधबार, आषाढ १७, २०७७
सुन्नुहोस् न झ्याल थोरै खोलौँ न है ? कानमा ठोक्किन आईपुगेको न्यानो तथा अपरिचित आवाजले निन्द्रा विथोलिदियो । हुन्छ, थोरै खोल्नुहोस् न मैले स्विकृतीको श्वरमा नम्र आवाज फर्काएँ ।उनले सहजताका साथ झ्याल खोलिन् अनी थोरै सहजताका साथ अगाडी सरिन । मैल पूर्ववत मुद्रामा बसको सिटमा पिठ्यिुँ सोझ्याएँ ।
अगाडिको निन्द्रा गुमनाम भईसकेको थियो । बस आफ्नै रफ्तारमा गुडिरहेको थियो बस भित्रका मानिसहरु आ–आफ्नै धुनमा मस्त थिए । मधुर लाईट परावर्तित भएर उनको उनको अनुहारमा ठोक्किएर अनौठो विम्ब मेरो मनमा परेको थियो । नजिकै बसेकी अपरिचित ती पूर्ण युवतीले मेरो मेरो मनमा अनौठो तरंग उत्पन्न गराएको थियो । बोल्नका लागि अतिरिक्त साहस जुटाउनु पर्ने थिएन । अघि नै उनले सुरु गरिसकेकी थिइन् ।
सुन्नुस् न कहाँबाट चढ्नु भएको । ए ! ए ! म ,म कलंकीबाट थाहा पाउनु भएन की कसो हो ? हैन गाडीमा चढ्ने वित्तिकै निदाईहाल्छु । होस नै भएन । ए ! भन्दै उनी आफ्नो सुरमा लागिन् । अनि कहाँ पुग्ने ? तपाई अनि किन रात्री बसमा त ? मेरो जवाफ भुँईमा झर्न नपाउँदै उनले वुटवल भनिन् ।काठमाडौँमा काम विशेषले आएको मेरो घर बुटवल हो । माइती, पाल्पा, तानसेन बजारमा नै पर्दछ भन्दै आफ्नो सविस्तार बताइन् ।
मैले पनि काम विशेषले कावासोती हिँडेको बताउँदै कुराकानीलाई जोड्ने प्रयास गरेँ । बाहिर रात छिप्पिँदै थियो । चुक घोप्ट्याएको निष्पट्ट अध्याँरोले बातावरण पूर्ण निशामा परिणत भएको थियो । बसभित्र बालिएको निलो बत्तिको प्रकासले उनले लगाएको निलो साडीमा परावर्तित भएर म पारदर्शी भएको थिएँ । सलक्क परेको जीउडाल, बसभित्रको उज्यालोसँगै बलेका आँखा अनि चम्किलो अनुहारले म मोहित भएको थिएँ । म अविवाहिता युवक । उनी विवाहिता नारी । एउटा पूर्ण महिला । रातको समय । बसभित्र सबै निदाईसकेका ।
वेतमास गुडेको गाडी । नचाहेर पनि गाडीको तुफानी हावा उनीतिर बग्थ्यो । तातो भएर मतिर ठोक्किन आईपुग्थ्यो । सिल्क्कि परेका केशराषीहरु मतिर फर्कन्थे । मस्त जवानीका साथ मलाई उनमुक्त जिस्क्याउँथे । फेरि अर्को हावाको झोक्कासँगै उनीतिरै फर्कन्थे ।
उनको र मेरो शारीरिक दूरी केहि ईन्चको फरकमा थियो । कहिले काहिँ गाडीले, उनलाई मुलायम स्पर्ष गर्ने मौका जुराई दिन्थ्यो । संयोग मिल्थ्यो । त्यो बखत म निकैबेर उनिसँगै टासिउँ झैँ हुन्थेँ । उनी कुनै प्रतिकृया जनाउन्नथिन् तर मलाई उनी थोरै पर हटेको अनुभूति हुन्थ्यो । हजुरको श्रीमान् के गर्नुहुन्छ नी ? मैले कुराकानीको सिलसिलालाई जोड्न चाहेँ । मलेसिया जानु भएको दुई बर्ष भयो ।
मैले पुनः कुराकानी लाई निरन्तरतरा दिएँ बिहे गरेको कति बर्ष भयो ? त्यस्तै दुई बर्ष भयो । उनले निराश मुद्रामा बताउँथिन् । अनि कतिको सम्पर्क गर्नुहुन्छ ? घर परिवारमा के कस्तो छ ? म अझ कुराकानीलाई अझ अगाडि बढाउथेँ । त्यस्तै त होनी पहिला त नियमितजसो हुन्थ्यो तर अहिले त्यती हुँदैन, उनले आँखीभौँ खुम्च्याउँथिन् र निधारमा आएको कपाल पन्छाउँदै भन्थिन् ।
उनको पुष्ट तथा चौँडा छाती, कसिलो जीउडालले म उनीप्रति लोभिईसकेको थिए मध्यरात तथा उनको स्पर्ष र बोलीको मधुरताले म आकर्षित भैसकेको थिएँ । वेलावखत उनले पनि मलाई आखाँ घुमाएर हेर्थिन् । म पनि टाँसिएर पर सथेँ । कुराकानीको सिलसिला जारी नै थियो कुरैकुरामा उनले आफ्नो हात मेरो तिध्रामा राखिन् । त्यही मौका पारेर मैले पनि मेरो हात उनको हातमाथि राखिदिएँ । उनले कुनै प्रतिकृया जनाइनन् ।
म अझ अगाडि बढेर उनको कुमम टाउको अड्याएँझै गरेँ उनले अगाडि सरेर अझैँ सहज बनाई दिइन् । मौन स्विकृति प्रदान गरिन् ।
उनी विहाहिता हुनाले परिपक्व थिइन् । छिट्टै मप्रति आकर्षित भएकी उनको अपिल म बुझ्न सक्ने भैसकेको थिएँ । उनी विस्तारै मतर्फ सरिन् । म निदाएको बहानामा थिएँ । उनले नजानिँदो पाराले मेरो कपाल मुसार्न थालिन् । म श्वास नफेरेको तालमा उनको स्पर्श आश्वादन गरिरहेको थिएँ ।
उनी अझै अगाडि बढिन र जथाभावी जथाभावी स्पर्ष गर्न थालिन् ।
उनको यसप्रकारको स्पर्षले मैले आफूलाई सम्हाल्ने सक्ने अवस्था रहेन । मैले पनि हात अगाडि बढाएँ । पुष्ट बक्षस्थलमाथि कव्जा जमाए । दुवै हात उनको बक्षस्थल वरपर दगुराउन थाले । यसबाट उनी निकै तरंगित भइन् । राफिलो बनिन् । म उनको भर्भराउँदो यौवनको दहमा पौडन थालिसकेको थिएँ । उनले पनि मेरो सवै अंग प्रत्यंगमा कव्जा जमाईसकेकी थिइन् ।
केहिबेरको स्पर्ष पछाडि उनी शिथिल भइन् तै पनि उनले मेरो अंग प्रत्यंगमा स्पर्षमा गरिनै रहिन् । मैले पनि उनको लगाएको स्वेटर र साडििभत्र नै हात पसाएर उनको स्त्रित्वको रु भोजन गरिरहेको थिएँ । यसप्रकारको क्रम धेरै बेर रहन पाएन । यो भन्दा अघि बढेर कुनै कृयाकलाप गर्न हामीलाई कठिनाई थियो ।
अचानक बत्ति बल्यो । मुङ्गिलन आईपुगेछ । बस रोकियो । सवै यात्रु खाना खान उत्रिए । मैले हामी पनि उत्रिने कि भनरे सोधेँ । उनले नउत्रने जवाफ दिइन् । सवै यात्रु उत्रिएको मौका पारेर उनी भने अझै वेग्लै हाउभाउ देखाउन थालिन् । म पनि तयारै थिएँ । उनले जे गरिन् त्यो चुपचाप सहेँ । आग्रह मुताविक नै उनको अंग प्रत्यंगमा खेलेँ । मन्द मन्द गतिमा । उनको श्वासको लयमा । फेरि सबै यात्रु फर्किए ।
धेरैले हामीलाई नियालेनन् सायद श्रीमान् श्रीमती भन्ठानेर होला । केहिवेर पछि बत्ति निभ्यो । त्यो क्रमको सुरुवात पुनः सुरु भयो । बाहिर छिटपुट उज्यालाका धर्षाहरु देखा पर्न थाले खलाँसीले कावासोती बोल्यो । उनको अंगालोबाट फुत्किएर जानु पर्ने भयो । मैले उनको शरीरबाट हात निकालेँ । उनको नम्वर मागेँ । मोबाईलमा नम्वर सेभ गरेँ । काठमाडौँ आए पछि पुनः भेट्ने र अधुरो इच्छा पूरा गर्ने बाचा गर्दै विदा भएँ । उनी ननिको मान्दै मलाई नियाली रहिन् हुन सक्छ उनको आँखामा आउन्जेल । अस्तु ।
रामनाथ खनाल (मझेरी डटकमबाट)